Jeceylka dadka kala diimaha ah miyaa kala fogeynaya dadka Hindiya? - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka AMRUTHA VARSHINI
''Waan jeclahay Adeta, farxad baan dareemaa markaan la joogo maalintii oo dhan inta aan shaqada ku maqanahay waa uu isugaa, raashiinka waan wada karsanaa wadajir ayaana u cunaa, shaqadiisa ayaan ka sheekeysana, waala isku keen abuuray''.
Caisha waa gabadh da'yar 21 sano jir ah, waana jeceylka Adeta, iyada oo indhaha isku qabaneyso jeceyl awgii ayay sharaxeysaa jeceylka ay u heyso Adeta.
''Waxaan ku kulanay facebook, labo sano ma aanan arkin oo wax fariimo ah iima soo dirin, markii ugu horeysay labadeena qofna ma aaminin xiriirkeena facebooka''. Ayay tiri Caisha
Hindiya: Malaayin qof oo ka qeyb galaya munaasabad dimeed u gaar ah
Caisha iyo Adeta haatan waa ay wada nool yihiin waxay labo sano ku nool yihiin guri yar oo ku yaallo Hindiya waxaana la nool eygooda.
Waxay in badan ka haasaawayeen facebooka, balse ugu dambeyn waa ay kulmeen, qof walbana qofka kale dhaqankiisa aad ayuu ka helay.
Caisha iyo Adeta haatan waxay rajeynayaan inay aqal galaan balse xiriirkooda ma ahan wax caadi ah, oo jeceylkooda waxuu ka gudbay soohdinta diinta, sababtoo ah Caisha waa gabadh muslimad ah Adetana waa Hindu.
''Markii aan isbaranay diimaheena muhiim ma ahayn, qoyskeena ayaase musiibo nagu noqday, labadeenaba dhibaato badan ayaan la kulanay, dhankeyga qoyskeyga ayaa bilaabay inay i dhibaan.
''Qoyskeeda xitaa markii ay ogaadeen dhibaato badan ayaa nasoo wajahday, hooyadey waxay doontay inay ii guuriso gabar kale, iyada aabaheedna sidaas oo kale ayuu doonay oo inuu nin kale ku daro. Ayuu yiri Adeta markale
Balse Caisha iyo Adeta oo labadooduba aad isku jeclaa xiligaasi diyaar uma aysan ahayn guur kale iyo in ay kala fogaadaan, si weyn ayayna ugu gacan seereen arrintaasi.
Caisha iyo Adeta waxay ka carareen qoyskooda waxaana ku adkaatay inay ku dhex noolaadaan bulshada sababo la xiriira jeceylkooda.
Gabadhan waxay ka carartay guriga waalidkeed si aan loogu guurin nin kale, waxayna arrintaasi u sameysay jeceylkeeda Adeta awgii.
''Waxaa la igu xiray guri shan bilood, waxaan u baqay nafteyda sababtoo ah waxaa jiro gabdho badan oo la dilay sababo la xiriira arrintaan''. Ayay tiri Caisha
Nin 40 sanno jir ah oo kufsaday gabadh saddex jir ah
Hooyo gabadheeda u hibaysay haddiyad mar la arag ah
Haddaba, in la isku diido lamaanaha doonaya inay is calfadaan balse kala diimaha ah, miyaa sababta in wiilasha iyo gabdhaha kala diima ah loo geysto dilal?
Dalka Hindiya inta badan waxaa ka dhaca dilal qorsheysan oo qoysaska qaar ay u geystaan gabadha ama wiilka waxa jeclaado gaar ahaan kuwa kala diimaha ah.
''Dhibaatada ugu weyn ee haatan soo shaac baxday ayaa ah in Muslimiinta iyo Hinduuga dalkan ay abuurayaan kala qeybsanaan''. Ayuu yiri sarkaal ka tirsan booliiska
Darraasad dhawaan laga soo saaray dalkaasi Hindiya waxay muujisay in boqolkiiba 77 kiisas ah dil ah la diiwaangeliyay.
Sikastaba, gabdhaha iyo wiilasha da'yarta ah ee dalkan Hindiya ayaa ah kuwa dareemaya xoriyad iskuna kalsoon si ka duwan aabayaashoodii hore, wax dan ahna kama lahan in loo tixgeliyo jeceylkooda iyo in kale.
Balse, kumanaan dhalinyaro ah ayaa halkaan dareemaya inay halis tahay inay is jeclaadaan labo qof oo kala diin ah.